के छ गूगलको नयाँ भर्शनमा ? | गृहपृष्ठ
Home प्रविधि के छ गूगलको नयाँ भर्शनमा ?
के छ गूगलको नयाँ भर्शनमा ?
इण्टरनेट ब्राउजर गूगल क्रोमको नयाँ भर्शन सार्वजनिक भएको छ । गूगलले विण्डोज, म्याक ओएस र लिनक्सका लागि क्रोम ६२ सार्वजनिक गरेको हो । यो अपडेटमा कुनै हानिकारक हुन सक्ने वेबसाइटमा आफ्नो डाटा राख्दा पनि चेतावनी आउँछ । नयाँ अपडेट मानिसले सहजै पाउन पनि सक्ने बताइएको छ ।
गूगलले आफ्नो ब्राउजर सुरक्षित होस् भन्नका लागि ६ देखि ७ हप्तामा नयाँ अपडेट ल्याउने गरेको छ । क्रोम ६२ मा गूगलले कुनै साइट लगइन गर्दाको समयमा उक्त साइट जोखीमपूर्ण रहे/नरहेको जानकारी दिन्छ । साथै, कुनै साइट खोल्दा सो साइट सुरक्षित रहे÷नरहेको भन्ने जानकारी पनि पाउन सकिन्छ ।
गूगलले अहिले कम्पनी कुनै पनि समस्या नहोस् भन्ने विषयमा काम गरिरहेको जानकारी दिएको छ । पछिल्लो समय इण्टरनेटको माध्यमबाट विभिन्न किसिमका गैरकानूनी काम पनि हुने गरेको कारण इण्टरनेट ब्राउजरले सुरक्षा प्रणाली बलियो बनाउने उपाय रोजेका हुन् । (एजेन्सी)